Maxay ku saabsanaan kartaa khudbadda MW Farmaajo jeer uu dalku qarka u saaran yahay xasarad dastuuri ah | Hadalsame Media
Home Wararka Maxay ku saabsanaan kartaa khudbadda MW Farmaajo jeer uu dalku qarka u...
Maxay ku saabsanaan kartaa khudbadda MW Farmaajo jeer uu dalku qarka u saaran yahay xasarad dastuuri ah
(Muqdisho) 06 Feb 2021 – Waxaa Baarlamanka DF haatan fadhiya xildhibaanno ka jawaabaya kalfadhi aan caadi aheyn oo uu horay ugu baaqay MW Somalia, Md Maxamed Farmaajo, kaasoo halkaa lagu wado inuu khudbo ka jeediyo.
Waxaa kulankan shir guddoomin doona Guddoomiyaha Aqalka Hoose Md Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan, waxaana qaaddacay Guddoonka Aqalka Sare oo sheegay in aan kulankaa lagu soo wargelin, waloow ay joogaan senetarro ka tirsan aqalkaasi.
Waxaa soo baxaya warar badan oo ku saabsan waxa ay daarranaan doonto khudbadda MW Farmaajo, qaar baa sheegaya inuu dalban doono muddo kororsi sanad ah, halka ay wararka qaarkood xitaa sheegayaan inuu is casili karo.
Kulankan ayaa imanaya jeer uu burburay shirkii Dhuusamareeb kaddib markii la isku khilaafay cidda maamulaysa doorashada Gobolka Gedo, gaar ahaan magaalada Garbahaarey oo ka mid ah labada meelood ee lagu qabanayo doorashada.
Dalka ayaa haatan qarka u saaran xasarad dastuuri ah, iyadoo ay dadwaynuhu aad uga niyad xun yihiin sida wax loo wado min Madaxtooyada ilaa maamullada qaar oo ay ku dhaliilsan yihiin mas’uuliyad xumi.
Previous articleTOOS u daawo: Fiorentina vs Inter Milan, Hertha Berlin vs Bayern Munich – LIVE (Shaxda Sugan)
Next articleCudur halis ah oo ka bilowday Gobolka Soomaalida Itoobiya & tillaabo la qaadayo